प्रचण्ड पत्नी सीतालाई विचित्रको पिएसपीले... :: सन्जिब बगाले :: Setopati
सन्जिब बगाले काठमाडौं, चैत १४
अमेरिकामा उपचारपछि बिहीबार स्वदेश फर्किएकी प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल। तस्बिर : प्रचण्डको सचिवालय
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पत्नी सीता दाहाल अमेरिकामा उपचार गराएर बिहीबार साँझ स्वदेश आइपुगेका छन्।
सीता ‘प्रोगेसिभ सप्रान्युक्लियर पाल्सी’ (पिएसपी) रोगबाट पीडित छन्। त्रिभुवन विमानस्थलमा संवाददातासँग कुरा गर्दै दाहालले सीतालाई लागेको पिएसपी विचित्रको रोग भएको बताए।
आमा-बुवासँगै अमेरिका गएकी छोरी गंगा दाहालका अनुसार सीताको उपचार अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीको जर्ज टाउन युनिभर्सिटी हस्पिटल र अलाबामाको बर्मिन्गम युनिभर्सिटी हस्पिटलमा गराइएको हो।
अमेरिका जानुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रचण्डले सीतालाई पिएसपी रोग लागेको बताएका थिए। यसअघि सीतालाई सिंगापुरका अस्पतालमा पनि लगिएको थियो। सिंगापुरमा रहँदा र फर्किएपछि सीताको उपचारमा ‘वाटर थेरापी’ गराइएको थियो। उनले म्याग्दीको बेनी पुगेर तातोपानी कुण्डमा नुहाएकी थिइन्।
यो रोग के हो, किन निको हुँदैन, सीता दाहालले आउने दिनमा के कस्ता अपठ्यारा झेल्नुपर्ने हुन सक्छ? यी सबै चासो लिएर हामीले कन्सल्टेन्ट न्युरोलोजिस्ट डा. इशा ढुंगानालाई सोध्यौं।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत १४, २०७५, १२:२१:००